musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Kuzviparadzanisa-kwemahara ndege kuSingapore izvozvi neLufthansa
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Singapore Kupwanya Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Lufthansa neSingapore Airlines vachapa pamwe chete imwe yeiyi Vaccinated Travel Lane nendege mazuva ese, kungave kubva kuFrankfurt kana Munich, kutanga musi wa16 Gunyana.
Ndege dzezuva nezuva kubva munaGunyana 16 mukubatana neSingapore Airlines.
Kudzivirirwa-kwemahara kupinda muSingapore chete kana kufamba kuchizotanga kuGerman.
Kuregererwa kwega kwega kunoshanda kune dzimwe nendege, dzinozivikanwa seCaccinated Travel Lane (VTL).
Kupinda muSingapore kubva kuGerman kune vafambi vakazara vachagoneka zvakare kubva munaGunyana 8. Iyo yakambomiswa yekuisa wega pakusvika muSingapore haichazodiwa kubva panguva ino zvichienda mberi. Germany ndiyo nyika yekutanga ine iro mega guta muSoutheast Asia rakasaina chibvumirano cheizvi.
Kuregererwa kwega kwega kunoshanda kune dzimwe nendege, dzinozivikanwa seCaccinated Travel Lane (VTL). Lufthansa uye Singapore Airlines Tichapa pamwe chete imwe yeiyi VTL nendege mazuva ese, kungave kubva muFrankfurt kana Munich, kutanga musi wa16 Gunyana. Mabhuku atove kukwanisika. Vatengi vachakwanisa zvakare kunyoresa VTL nendege paSingapore hurumende webhusaiti kutanga musi wa1 Gunyana.
"Singapore kuvhura haina kungogonesa vanhu kushanyira shamwari nemhuri kana kusangana nevezvemabhizinesi zvakare, asi zvakare inotumira chiratidzo chakakosha kune dzimwe nyika mudunhu," anodaro Elise Becker, Head of Sales for Lufthansa muAsia-Pacific. "Zvakakosha kupfuura nakare kose kuti nyika dzishande pamwe kutsvaga mhinduro dzekudzorera kufamba kwendege zvepasi rose zvakare. Lufthansa neSingapore Airlines zviri kubatsira zvikuru mukusimudzira uku. ”
Kubva zvakaziviswa nehurumende yeSingapore, kudiwa kwendege pakati peGerman neSingapore kwakawedzera zvakapetwa katatu.
Maitiro anotevera anokodzera vafambi ve ndege yeVTL kuenda kuSingapore:
mushonga wakazara wakaitwa kuGerman kana Singapore nePfizer-BioNTech / Comirnaty, Moderna, kana mumwe mushonga weWHO EUL.
gara kuGerman uye / kana Singapore kwemazuva angangoita 21 akateedzana vasati vaenda kuSingapore. VTL vafambi havafanirwe kuve chizvarwa cheGerman.
Covid-19 PCR bvunzo ine mhedzisiro yakaipa yakatorwa kwakawanda maawa makumi mana nemasere usati wasimuka uye wechipiri PCR bvunzo paunosvika muSingapore. Kusvikira mhedzisiro yakaipa yenyaya iyi yagamuchirwa, vafambi vanofanirwa kugara muhotera yavo yakatarwa kana pekugara muSingapore. Zvichienderana nezvenguva yerwendo, kuwanda kwemamwe mabvunzo ePCR angangodiwa muSingapore.
kubhururuka kwendege pane yakatarwa ndege yeVTL.